2 Madzimambo 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 15:1-38
15 Mugore rechimakumi maviri nemanomwe raJerobhoamu mambo waIsraeri, Azariya+ mwanakomana waAmaziya+ mambo waJudha akava mambo. 2 Akanga aine makore gumi nematanhatu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi mashanu nemaviri ari muJerusarema.+ Amai vake vainzi Jekoriya wokuJerusarema. 3 Iye akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha, maererano nezvose zvakanga zvaitwa nababa vake Amaziya.+ 4 Asi nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa.+ Vanhu vakanga vachiri kubayira zvibayiro nokukwidzira utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira.+ 5 Jehovha akazorova mambo nedenda,+ akaramba aine maperembudzi+ kusvikira pazuva raakafa, uye akaramba achigara muimba yake asingachaiti mabasa,+ Jotamu+ mwanakomana wamambo paaitarisira imba yacho, achitonga+ vanhu vomunyika yacho. 6 Mamwe mabasa ose aAzariya nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 7 Azariya akazorara nemadzitateguru ake,+ vakamuviga pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi; uye mwanakomana wake Jotamu akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 8 Mugore rechimakumi matatu nemasere raAzariya+ mambo waJudha, Zekariya+ mwanakomana waJerobhoamu akava mambo waIsraeri muSamariya kwemwedzi mitanhatu. 9 Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa nemadzitateguru ake.+ Haana kurega zvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ 10 Zvino Sharumu mwanakomana waJabheshi akamumukira,+ akamubaya+ kuIbreyamu,+ akamuuraya, akatanga kutonga panzvimbo pake. 11 Mamwe mabasa ose aZekariya, akanyorwa mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri. 12 Iroro ndiro raiva shoko+ raJehovha raakanga audza Jehu, achiti:+ “Vanakomana+ vachagara pachigaro choumambo chaIsraeri nokuda kwako kusvikira kuchizvarwa chechina.” Zvakaitika saizvozvo.+ 13 Zvino Sharumu mwanakomana waJabheshi, akava mambo mugore rechimakumi matatu nemapfumbamwe raUziya+ mambo waJudha, akaramba achitonga kwomwedzi uzere ari muSamariya.+ 14 Menahemu+ mwanakomana waGadhi akabva auya achibva kuTiza+ akasvika kuSamariya, akabaya Sharumu+ mwanakomana waJabheshi ari muSamariya, akamuuraya; uye iye akatanga kutonga panzvimbo pake. 15 Mamwe mabasa ose aSharumu nokumukira+ kwake kwaakaita, zvakanyorwa mubhuku remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri. 16 Panguva iyoyo Menahemu ndipo paakaparadza Tifsa nezvose zvaiva mariri nenharaunda yaro kubvira kuTiza, nokuti harina kumuzarurira, iye akariparadza. Akatumbura vakadzi varo vose vaiva nepamuviri.+ 17 Mugore rechimakumi matatu nemapfumbamwe+ raAzariya mambo waJudha, Menahemu mwanakomana waGadhi akava mambo waIsraeri kwemakore gumi ari muSamariya. 18 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+ Haana kurega zvivi zvose zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo,+ mazuva ake ose. 19 Puri+ mambo weAsiriya+ akauya munyika. Naizvozvo Menahemu akapa+ Puri matarenda esirivha+ chiuru, kuti amubatsire kusimbisa umambo hwake.+ 20 Naizvozvo Menahemu akatora sirivha yacho kuvaIsraeri, akaitora kuvarume vose vaiva nesimba, vakanga vakashinga,+ kuti ape mambo weAsiriya mashekeri esirivha makumi mashanu nokuda kwomurume mumwe nomumwe. Mambo weAsiriya akabva adzokera, haana kugara munyika yacho. 21 Mamwe mabasa ose aMenahemu+ nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 22 Menahemu akazorara nemadzitateguru ake, mwanakomana wake Pekahiya+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 23 Mugore rechimakumi mashanu raAzariya mambo waJudha, Pekahiya mwanakomana waMenahemu akava mambo waIsraeri muSamariya kwemakore maviri.+ 24 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+ Haana kurega zvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ 25 Peka+ mwanakomana waRemariya mubatsiri+ wake akabva amumukira,+ akamuurayira muSamariya mushongwe yokugara yeimba yamambo+ aina Agobhu naAriye, uye aiva nevarume makumi mashanu vevanakomana vokuGiriyedhi. Naizvozvo akamuuraya, akatanga kutonga panzvimbo pake. 26 Mamwe mabasa ose aPekahiya nezvose zvaakaita, zvakanyorwa mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri. 27 Mugore rechimakumi mashanu nemaviri raAzariya mambo waJudha, Peka+ mwanakomana waRemariya+ akava mambo waIsraeri muSamariya kwemakore makumi maviri. 28 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+ Haana kurega zvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ 29 Mumazuva aPeka mambo waIsraeri, Tigrati-pireseri+ mambo weAsiriya+ akauya, akatora Ijoni+ neAbheri-bheti-maaka+ neJanoa neKedheshi+ neHazori+ neGiriyedhi+ neGarireya,+ nyika yose yaNaftari,+ akavatapa, akaenda navo kuAsiriya.+ 30 Hoshea+ mwanakomana waEraa akazomukira+ Peka mwanakomana waRemariya, akamubaya,+ akamuuraya; uye akatanga kutonga panzvimbo pake mugore rechimakumi maviri raJotamu+ mwanakomana waUziya. 31 Mamwe mabasa ose aPeka nezvose zvaakaita, zvakanyorwa mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri. 32 Mugore rechipiri raPeka mwanakomana waRemariya mambo waIsraeri, Jotamu+ mwanakomana waUziya+ mambo waJudha akava mambo. 33 Akanga aine makore makumi maviri nemashanu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nematanhatu ari muJerusarema. Amai vake vainzi Jerusha, mwanasikana waZadhoki.+ 34 Akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha.+ Akaita maererano nezvose zvakanga zvaitwa nababa vake Uziya.+ 35 Asi nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa. Vanhu vakanga vachiri kubayira zvibayiro uye kukwidzira utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira.+ Ndiye akavaka gedhi rokumusoro reimba yaJehovha.+ 36 Mamwe mabasa ose aJotamu, zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku remabasa emazuva emadzimambo aJudha?+ 37 Mumazuva iwayo Jehovha akatanga kutuma+ Rezini+ mambo weSiriya naPeka+ mwanakomana waRemariya kunorwisa Judha. 38 Jotamu akazorara nemadzitateguru ake, akavigwa pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi tateguru vake;+ uye mwanakomana wake Ahazi+ akatanga kutonga panzvimbo pake.
2 Madzimambo 15